Taariikhda My Butros » Macnaha Kiss ah
Last updated: Nov. 21 2020 | 2 min akhri
Macnaha of dhunkasho? Su'aal million dollar ee xiriirka. Waxaan qabaa in aad u baahan tahay inaad ku rid ee macnaha guud ee xiriirka aad ku sugan tahay iyo qofka aad tahay ee xiriirka ka leh. Haddii aad ku jirto xiriir sugnaa marka la barbar dhigo xidhiidh cusub in macnaha noqon kartaa xoogaa ka duwan sida iska cad, laakiin shakhsiyadda qofka aad la socotid waxa uu leeyahay waxyaabo badan oo ay sameeyaan waxa ay macnaheedu tahay in aad. Bal aan isla eegno macnaha kala duwan oo ammaanta lahaa, ama aan si ammaan badan, dhunkasho.
Old The Romantic
Haddii aad jacayl waa jaceyl ah, nooca taabashada ka dibna waxaad ka jawaabi doontaa aad ayaana ugu faraxsanahay loo Daadiyey in dhunkashooyinkiisu! The old jaceyl qaadataa jacayl dhab ah iyo dhunkasho ay buuxsami doonaan diirimaad, hamiday iyo jacaylka. Waxaa misna laakiin hubi inaad dib u ku tusin jaceyl xad lahayn. Samee dadaal aad si xitaa haddii aadan ugu taataabtay ee dabiiciga ah naftaada. Nooca jaceyl u noqon doonaa sida tani in ay tahay xidhiidh cusub ama xiriir ka go'an laakiin sida xiriirka ka dhaliyo iyo soconayo dhunkasho ay noqon doonaan qaar badan oo ka macno leh.
Nooca Zino in xiriir ee waa fanaaniinta cusub yihiin in la qaado la yaabtid ama cusbo laakiin riyaaqay si kastaba ha ahaatee! Marka waqtigu sii dheeraadaba dhunkaday, kuwaas oo noqon doona damaca ay u jecel yihiin haddii xiriirka uu helo ka sii daran. Just siin waqti. Nooca Zino qaadataa waqti ay si aynu jacayl Quluubtooda, laakiin markii aad tahay mid ka mid ah iyaga waxay kuu sheegi doonaa waxa ku saabsan! Oo iyana waxay u dhunkasho noqon doono mid sida ay sameeyaan!
Waxaa jira noocyo badan oo dhunkaday ka ka dhalto buuxa oo ku saabsan, dhunkasho dareen in jilicsan ee, dhunkasho tur. Waxaa jira carwooyin dadweynaha of Jacayl carwooyin iyo kuwa gaarka ah ee Jacayl.
Dhunkasho buuxda-on kabuuxaan ku hamiday waa calaamad u ah jacayl run. Ma doonayaan bushimahooda ayay idinkaa iska tago oo waa halkii u daran oo qurux badan, halkaas oo waqti in aad tahay adduunka oo midba midka kale ee labada dhan, qabtay daqiiqad ah oo qoto dheer ee isku xirta xoogga dhunkashada.
Jilicsan ayaa, dhunkasho wanaagsanu waa mid kaas oo badan oo lamaane ee isticmaalka jacaylka. Waa heer ay dhab ahaantii raaxo waa wada laakiin tumashada sidoo kale waa dhunkasho oo dad badan u isticmaalaan sidii ay dhunkasho ugu horeysay maxaa yeelay waa laga xishoodo lagana hubin sida loo wajaho joogo weyn ee ay xiriirka.
Dhunkasho ayaa dadweynaha lagu qaaday karaan mid ka mid ah laba siyaabood oo ku xidhan tahay qofka aad lug ku leh, aad u ogaato ku kala duwan yihiin iyo waxa riixaya ay. Mid ka mid ah jidkiisu waa tusayo in ay haystaan ​​qof taas oo dhinaca xun laakiin on a dadka kale dhinaca togan taas samayn sababta oo ah waxay ku hanweynahay inaan idinla jiri yihiin oo ma jeclin cida ogyahay aad wada joogtaan.
Dad badan ma jecla bandhigay oo dhan dadweynaha of Jacayl laakiin taas macnaheedu ma ay uma baahnid inaad u jeclaataa. Sida dhunkasho dadweynaha in kastoo lagu qaaday kartaa laba siyaabood oo mar kale ku xirnaan doontaa qofka aad la. Waxa ay noqon doontaa sahlan si aad u ogaato in ay si gaar ah aad dhunkashada, maxaa yeelay, iyagu ma ay rumaysan yihiin in ama waa sirgaxan la PDA ama haddii ay tahay waayo, ma ay ku faani filan oo aad si aad dhunkato ee dadweynaha.